Former New Mexico Gov. Bill Richardson emerges from his office in Santa Fe, N.M., Thursday, March 9, 2020.
အမေရိကန် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး ဟောင်းလည်းဖြစ် New Mexico ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Bill Richardson ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ လည်းတွေဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ Bill Richardson ကတော့ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ ပုဂ္ဂလိကခရီးစဉ်ဖြစ် တယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ကိုဗစ် ၁၉ အတွက်အကူအညီအပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက် ထားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေအတွက်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် နဲ့ မြန်မာ့အရေး ချင်းပြည်အရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ The Pastor Fellowship USA ရဲ့တွဲဘက် အတွင်းရေးမှုး ဆလိုင်း ဟင်နရီ ဘန်ကျဲလျံ တို့ကို ကိုဇော်မိုးကျော်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော်။ ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ Bill Richardson မြန်မာပြည်ကိုသွား တယ်လို့သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ သူ့အနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန်အနေနဲ့ပေါ့လေ ကြားဝင်စေ့ စပ်ညှိနိုင်းမှုမျိုး ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့အစလို့ထင်ပါသလားခင်ဗျ။
ဦးဘိုလှတင့်။ ။ သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မှာလည်း သူ့ရဲ့ Private visit (ပုဂ္ဂလိကခရီးစဉ်) သွားတဲ့ Trip (ခရီး) ဘဲဖြစ်တယ်။ ဒီ Trip ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဘဲ၊ ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ပတ်သက်လို့၊ ကျနော်တို့၊ ကာ ကွယ်ဆေးတွေ၊ ကုသနိုင်တဲ့တခြားဆေးဝါးတွေတချိန်ထဲမှာ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီဖြန့်ဖြူးမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သွားတယ်လို့ဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုဒါဟာဖြင့်တခြားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပါဝင်ပတ်သက်မလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ ဘယ်လိုမှဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Comment (မှတ်ချက်) ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။
ကိုဇော်မိုးကျော်။ ။ အခုလိုအချိန်မျိုးဟာ အမေရိကန်ရဲ့ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ ၀န်ကြီးဟောင်း လည်းဖြစ်၊ ဒီထိပ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးသမား၊ ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတဦးဟာ အခုလိုအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ၊ သင့်တော်ရဲ့လား၊ ဘယ်လိုအနေ အထားမျိုးရှိတယ်ထင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဦးဘိုလှတင့်။ ။ ဒါကတော့အင်မတန်မှ၊ ဟို ကျနော်တို့အနေနဲ့အတော်တော်လေးစိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်တဲ့အနေအထား မှာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတကာတိုအိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတို့နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအပါအ၀င် ကုသမဂ္ဂအဆုံးပေါ့နော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေမှာလူသားခြင်းစာနာ ထောက်ထားမှုကိစ္စတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခတွေကို ကြားဝင်စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ပေး ချင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီလက်ရှိတရားမ၀င် စစ်အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို သူတို့ကိုတရားဝင်အသိ အမှတ်ပြုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေသက်ရောက်သွားမယ့် အနေအထားမျိုးကို ကျနော်တို့လုံးဝမလိုလားပါဘူး။
ကိုဇော်မိုးကျော်။ ။ အခုအချိန်အမှာအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီ စစ်အစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြုသလိုဖြစ်သွားသလား၊ စစ်အစိုးရ အတွက်တော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါသလား၊ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဦးဘိုလှတင့်။ ။ဒီနေ့အချိန်မှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ ဒီ စစ်ကောင်စီဟာ ရတဲ့နည်းတွေနဲ့၊ ဟိုအမြဲတမ်းလှည့်စားဖို့ကြိုးစား လေ့ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကတိပေးထားချက်တွေကိုတော့ မလိုက်နာဘဲ ဘာကြောင့်မို့ Bill Richardson ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုမှလက်ခံလည်းဆိုတာကျနော်တို့ပြန်ပြီးမေး ခွန်းထုတ်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဇော်မိုးကျော်။ ။နောက်ဒီ Bill Richardson ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ သူကတော့ပြောတာကတော့၊ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိက ခရီးစဉ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားခင်ဗျ။ ဒီ လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူ ဆိုတာမျိုးတွေကလည်း နိုင်ငံကတာအဖွဲ့အစည်းတွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဒါမှမဟုတ် ကုလသမဂ္ဂ စသည်ဖြင့် ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ လုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကိုသူကကိုယ်စားပြု ပြီးသွားရောက်ဆွေးနွေးပေးတာလားပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခရီးစဉ်လို့ပြောတယ် ဆိုပေမယ့်၊ ဟုတ်လား ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပေါ့နော်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချိန်တုန်းက ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်နေအိမ်အကျယ်ချုပ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ကာက လတုန်းက ဒီ ဆီနိတ်တာ ဂျင် ၀က် (Jim Web) တို့ မြန်မာပြည်ကိုလာခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်၊ ကြားကနေ၀င်ရောက်စေ့စ့ပ်ဆွေးနွေး ပေးခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း ဒီလိုကိစ္စတွေကိုဦး တည်တယ်လို့ထင်ပါသလားခင်ဗျ၊ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလားခင်ဗျ။
ဦးဘိုလှတင့်။ ။ အဲဒါကတော့ ပြောဖို့အင်မတန်မှာစောသေးတယ်လိုဘဲ ကျနော်တို့ပြောကြရမှာပါ။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ သူပြောတဲ့အတိုင်း၊ သူ့ကြေငြာချက်အတိုင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မှာ ဒါဟာသူ့ရဲ့ private ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်။ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုး ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားတာတွေ့ရပါတယ်
ဒါကတော့ NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်ကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ Bill Richardson ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ချင်းပြည်အရေးတွေ ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ The Pastor Fellowship USA ရဲ့ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုဖြစ်တဲ့ ဆလိုင်း ဟင်နရီ ဘန်ကျဲလျံ ကိုလည်းမေးကြည့်ပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော်။ ။ အခုဒီ အမေရိကန်ဆီးနိတ်အမတ်ဟောင်းပေါ့ Bill Richardson ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဆလိုင်း ဟင်နရီ ဘန်ကျဲလျံ။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့အစိုးရနဲ့ ဘဲတွေ့တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ ကျနော်တုိ့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဘဲ တကယ်ဘဲ ကျနော်တို့ အဲလိုသူသား ခြင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ အဲလို တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေ ကိုသွားဖို့ သွားရောက်ဖို့ရန်ကျနော်တို့ကတောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော်။ ။ အခုလို ထင်ရှားတဲ့အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတဦးကအခုလိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်တာ ဟာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်ပြုသွားသ လိုများဖြစ် သလား၊ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဆလိုင်း ဟင်နရီ ဘန်ကျဲလျံ။ ။ တဘက်နေပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့စစ်အရကို အသိအမှတ်ပြုသလိုဖြစ်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ အခုအချိန်မှာကျနော်တို့ စစ်အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက် မဆက်သွယ်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ NUG အစိုးရနဲဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်တဲ့ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ သူတို့ policy (မူဝါဒ) ခြင်းမတူတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ဖက်ကနေတော့ အဲ့လိုတိုက်ရိုက် ဝေဖန်ပြောဆိုလို့ မရဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် နဲ့ မြန်မာ့အရေး ချင်းပြည်အရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ The Pastor Fellowship USA ရဲ့တွဲဘက် အတွင်းရေးမှုး ဆလိုင်း ဟင်နရီ ဘန်ကျဲလျံ တို့ကို ကိုဇော်မိုးကျော်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
Bill Richardson ရဲ့မွနျမာခရီးစဉျ အပျေါ မွနျမာ့အရေး သုံးသပျသူတခြို့အမွငျ
အမရေိကနျ ဆီးနိတျလှတျတျောအမတျဟောငျးလညျးဖွဈ၊ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာသံအမတျကွီး ဟောငျးလညျးဖွဈ New Mexico ပွညျနယျအုပျခြုပျရေးမှုးဟောငျးလညျးဖွဈတဲ့ Bill Richardson ဟာ မွနျမာနိုငျငံကိုရောကျရှိနပေါတယျ။ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီ ဥက်ကဌ ဗိုလျခြုပျမှုးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနဲ့ လညျးတှဆေုံဖို့ရှိနပေါတယျ။ Bill Richardson ကတော့ သူ့ရဲ့ခရီးစဉျဟာ ပုဂ်ဂလိကခရီးစဉျဖွဈ တယျလို့ ပွောဆိုထားပါတယျ။ ကိုဗဈ ၁၉ အတှကျအကူအညီအပါအဝငျ လူသားခငျြးစာနာထောကျ ထားမှုဆိုငျရာ ကိစ်စတှအေတှကျလို့ပွောဆိုထားပါတယျ။
သူ့ရဲ့ခရီးစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုငျရာ သံအမတျကွီး ဦးဘိုလှတငျ့ နဲ့ မွနျမာ့အရေး ခငျြးပွညျအရေးတှဆေောငျရှကျနတေဲ့ The Pastor Fellowship USA ရဲ့တှဲဘကျ အတှငျးရေးမှုး ဆလိုငျး ဟငျနရီ ဘနျကြဲလြံ တို့ကို ကိုဇျောမိုးကြျောက ဆကျသှယျမေးမွနျးထား ပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။ ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ထငျရှားတဲ့နိုငျငံရေးသမားတဦးဖွဈတဲ့ Bill Richardson မွနျမာပွညျကိုသှား တယျလို့သိရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ခရီးစဉျဟာ သူ့အနနေဲ့ ဒါမှမဟုတျ အမရေိကနျအနနေဲ့ပေါ့လေ ကွားဝငျစေ့ စပျညှိနိုငျးမှုမြိုး ဖွဈလာဖို့အတှကျကွိုးပမျးတဲ့အစလို့ထငျပါသလားခငျဗြ။
ဦးဘိုလှတငျ့။ ။ သူကိုယျတိုငျထုတျပွနျကွငွောခကျြမှာလညျး သူ့ရဲ့ Private visit (ပုဂ်ဂလိကခရီးစဉျ) သှားတဲ့ Trip (ခရီး) ဘဲဖွဈတယျ။ ဒီ Trip ရဲ့ရညျရှယျခကျြကလညျးဘဲ၊ ကိုဗဈ ၁၉ နဲ့ပတျသကျလို့၊ ကနြျောတို့၊ ကာ ကှယျဆေးတှေ၊ ကုသနိုငျတဲ့တခွားဆေးဝါးတှတေခြိနျထဲမှာ လူသားခွငျးစာနာထောကျထားမှုဆိုငျရာ အကူအညီဖွနျ့ဖွူးမှုကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျလို့သှားတယျလို့ဖျေါပွထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ အခုဒါဟာဖွငျ့တခွားအမရေိကနျပွညျထောငျစုကပါဝငျပတျသကျမလား ဆိုတဲ့မေးခှနျးကတော့ ဘယျလိုမှဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ Comment (မှတျခကျြ) ပေးလို့မရပါဘူးခငျဗြ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။ ။ အခုလိုအခြိနျမြိုးဟာ အမရေိကနျရဲ့ဆီးနိတျလှတျတျောအမတျဟောငျးလညျးဖွဈ၊ ဝနျကွီးဟောငျး လညျးဖွဈ၊ ဒီထိပျပိုငျးနိုငျငံရေးသမား၊ ထငျရှားတဲ့နိုငျငံရေးသမားတဦးဟာ အခုလိုအခွအေနမှော မွနျမာနိုငျငံကိုသှားရောကျတယျဆိုတော့ ဘယျလိုထငျပါသလဲ၊ သငျ့တျောရဲ့လား၊ ဘယျလိုအနေ အထားမြိုးရှိတယျထငျပါသလဲခငျဗြ။
ဦးဘိုလှတငျ့။ ။ ဒါကတော့အငျမတနျမှ၊ ဟို ကနြျောတို့အနနေဲ့အတျောတျောလေးစိုးရိမျမကငျး ဖွဈတဲ့အနအေထား မှာရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ကနြျောတို့ နိုငျငံတကာတိုအိမျနီးခွငျးနိုငျငံတို့နဲ့ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုအပါအဝငျ ကုသမဂ်ဂအဆုံးပေါ့နျော၊ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ပကတိအခွအေနမှောလူသားခွငျးစာနာ ထောကျထားမှုကိစ်စတှဘေဲဖွဈဖွဈ၊ ကနြျောတို့နိုငျငံရေး ပဋိပက်ခတှကေို ကွားဝငျစစေ့ပျဆောငျရှကျပေး ခငျြတာဘဲဖွဈဖွဈ၊ ဒီလကျရှိတရားမဝငျ စဈအာဏာသိမျး စဈကောငျစီကို သူတို့ကိုတရားဝငျအသိ အမှတျပွုတဲ့ ပုံစံမြိုးတှသေကျရောကျသှားမယျ့ အနအေထားမြိုးကို ကနြျောတို့လုံးဝမလိုလားပါဘူး။
ကိုဇျောမိုးကြျော။ ။ အခုအခြိနျအမှာအထီးကနျြဖွဈနတေဲ့ ဒီ စဈအစိုးရကိုအသိအမှတျပွုသလိုဖွဈသှားသလား၊ စဈအစိုးရ အတှကျတော့ကောငျးတဲ့ကိစ်စတခုဖွဈသှားတယျလို့ထငျပါသလား၊ ဘယျလိုထငျပါသလဲခငျဗြ။
ဦးဘိုလှတငျ့။ ။ဒီနအေ့ခြိနျမှာဆိုခဲ့လို့ရှိရငျတော့ ဒီ စဈကောငျစီဟာ ရတဲ့နညျးတှနေဲ့၊ ဟိုအမွဲတမျးလှညျ့စားဖို့ကွိုးစား လရှေိ့ပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့ အာဆီယံကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ ကိုယျ့ဒသေဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ဗိုလျခြုပျမှုးကွီးမငျးအောငျလှိုငျကိုယျတိုငျ ဧပွီလ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ ကတိပေးထားခကျြတှကေိုတော့ မလိုကျနာဘဲ ဘာကွောငျ့မို့ Bill Richardson ရဲ့ခရီးစဉျကိုမှလကျခံလညျးဆိုတာကနြျောတို့ပွနျပွီးမေး ခှနျးထုတျရမယျ့ ကိစ်စဖွဈပါတယျခငျဗြ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။ ။နောကျဒီ Bill Richardson ရဲ့ ခရီးစဉျဟာ သူကတော့ပွောတာကတော့၊ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ပုဂ်ဂလိက ခရီးစဉျလို့ပွောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ဖွဈနိုငျပါ့မလားခငျဗြ။ ဒီ လူသားခငျြးစာနာမှုအထောကျအကူ ဆိုတာမြိုးတှကေလညျး နိုငျငံကတာအဖှဲ့အစညျးတှေ အမရေိကနျပွညျထောငျစုအစိုးရ ဒါမှမဟုတျ ကုလသမဂ်ဂ စသညျဖွငျ့ ဒီလိုလုပျရတဲ့ လုပျရတဲ့အနအေထားမြိုးတှရှေိပါတယျ။ ဒါကိုသူကကိုယျစားပွု ပွီးသှားရောကျဆှေးနှေးပေးတာလားပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပုဂ်ဂလိက ခရီးစဉျလို့ပွောတယျ ဆိုပမေယျ့၊ ဟုတျလား ဖွဈနိုငျပါ့မလားပေါ့နျော၊ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့တခြိနျတုနျးက ဒီဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အကယျြခြုပျနအေိမျအကယျြခြုပျ နအေိမျအကယျြခြုပျကနြတေဲ့ကာက လတုနျးက ဒီ ဆီနိတျတာ ဂငျြ ဝကျ (Jim Web) တို့ မွနျမာပွညျကိုလာခဲ့တာမြိုးတှရှေိတယျ၊ ကွားကနဝေငျရောကျစစေ့ပျဆှေးနှေး ပေးခဲ့တာမြိုးတှရှေိခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုလညျး ဒီလိုကိစ်စတှကေိုဦး တညျတယျလို့ထငျပါသလားခငျဗြ၊ ဖွဈနိုငျတယျလို့ထငျပါသလားခငျဗြ။
ဦးဘိုလှတငျ့။ ။ အဲဒါကတော့ ပွောဖို့အငျမတနျမှာစောသေးတယျလိုဘဲ ကနြျောတို့ပွောကွရမှာပါ။ ဒီခရီးစဉျဟာ သူပွောတဲ့အတိုငျး၊ သူ့ကွငွောခကျြအတိုငျးပွောနတောဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ထုတျပွနျကွငွောခကျြမှာ ဒါဟာသူ့ရဲ့ private ခရီးစဉျဖွဈတယျ။ လူသားခွငျးစာနာထောကျထားမှုဆိုငျရာ ဆိုတဲ့ကိစ်စမြိုး ကနြျောတို့ ထုတျပွနျကွငွောထားတာတှရေ့ပါတယျ
ဒါကတော့ NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုငျရာသံအမတျကွီး ဦးဘိုလှတငျ့ကိုမေးမွနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ ဒီ Bill Richardson ရဲ့ ခရီးစဉျနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ မွနျမာပွညျနဲ့ခငျြးပွညျအရေးတှေ ကိုဆောငျရှကျနတေဲ့ The Pastor Fellowship USA ရဲ့ တှဲဘကျအတှငျးရေးမှုဖွဈတဲ့ ဆလိုငျး ဟငျနရီ ဘနျကြဲလြံ ကိုလညျးမေးကွညျ့ပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။ ။ အခုဒီ အမရေိကနျဆီးနိတျအမတျဟောငျးပေါ့ Bill Richardson ရဲ့ ခရီးစဉျနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ဘယျလိုထငျပါသလဲခငျဗြ။
ဆလိုငျး ဟငျနရီ ဘနျကြဲလြံ။ ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ကတော့ ကွိုဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ သူ့ရဲ့အစိုးရနဲ့ ဘဲတှတေ့ာ မဟုတျဘဲနဲ့၊ ကနြျောတုိ့ခငျြးပွညျနယျမှာလညျးဘဲ တကယျဘဲ ကနြျောတို့ အဲလိုသူသား ခွငျးစာနာထောကျထားတဲ့ အကူအညီတှလေိုအပျနပေါတယျ။ အဲလို တကယျလိုအပျနတေဲ့နရောတှေ ကိုသှားဖို့ သှားရောကျဖို့ရနျကနြျောတို့ကတောငျးဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။ ။ အခုလို ထငျရှားတဲ့အမရေိကနျ နိုငျငံရေးသမားတဦးကအခုလိုအခြိနျမှာ မွနျမာပွညျကိုသှားရောကျတာ ဟာ အာဏာသိမျးစဈကောငျစီကို အာဏာသိမျးစဈကောငျစီကို အသိအမှတျပွုသှားသ လိုမြားဖွဈ သလား၊ ဘယျလိုထငျပါသလဲခငျဗြ။
ဆလိုငျး ဟငျနရီ ဘနျကြဲလြံ။ ။ တဘကျနပွေောရရငျတော့ ကနြျောတို့စဈအရကို အသိအမှတျပွုသလိုဖွဈသှားသလိုဖွဈသှားတယျလို့ ကနြျောထငျပါတယျ။ တကယျတမျးပွောရရငျတော့ အခုအခြိနျမှာကနြျောတို့ စဈအစိုးရနဲ့ တိုကျရိုကျ မဆကျသှယျဘဲနဲ့ ကနြျောတို့ NUG အစိုးရနဲဘဲဖွဈဖွဈ၊ ကနျြတဲ့ကနြျောတို့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှနေဲ့ ဘဲဖွဈဖွဈ ဆကျသှယျပွီးတော့ပွုလုပျသငျ့တယျလို့ဘဲ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံတနိုငျငံရဲ့ သူတို့ policy (မူဝါဒ) ခွငျးမတူတဲ့အခါမှာ ကနြျောတို့ဖကျကနတေော့ အဲ့လိုတိုကျရိုကျ ဝဖေနျပွောဆိုလို့ မရဘူးလို့ထငျပါတယျ။
NUG အစိုးရရဲ့ အာဆီယံဆိုငျရာ သံအမတျကွီး ဦးဘိုလှတငျ့ နဲ့ မွနျမာ့အရေး ခငျြးပွညျအရေးတှဆေောငျရှကျနတေဲ့ The Pastor Fellowship USA ရဲ့တှဲဘကျ အတှငျးရေးမှုး ဆလိုငျး ဟငျနရီ ဘနျကြဲလြံ တို့ကို ကိုဇျောမိုးကြျောက ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာပါ။